Sora typografika tsara indrindra amin'ny fanaovana logo: Fonta Logo | Famoronana an-tserasera
Miaraka amin'ny fiakaran'ny orinasan-tserasera dia ilaina ny famoronana mpamorona mpamorona hamorona ny votoatin'ny orinasa amin'ny sary famantarana. Ankehitriny fa orinasa maro no tonga amin'ny Internet, tsy ny eCommerces ihany, fa koa ny karazana pejin-tranonkala hafa, samy manana ny filany avokoa izy rehetra: mamorona sary famantarana. Ary amin'ny maha-mpamorona anao dia mila manana tsara ianao endritsoratra ho an'ny logo izay manome fahafaham-po ny mpanjifanao rehetra.
Noho io antony io dia anio hifantoka amin'ny fanomezana anao izahay anio endritsoratra samihafa ho an'ny logo, tsy ny tsara indrindra ihany, fa ireo tena tadiavina be, ireo afaka, ireo izay hanome izany fifandraisana manokana amin'ny tetikasanao izany… Te hahafantatra izay nofidininay ve ianao?
1 Mampiavaka ny fonosana ho an'ny logo
2 Karazana endritsoratra fononteny ho an'ny logo
3 Sora-tarehin'ny logo: ireto no tsara indrindra
3.4 Endritsoratra Logo: Didot
3.7 Fontan'ny Logo: Sabo
Mampiavaka ny fonosana ho an'ny logo
Mora ny misafidy endri-tsoratra ho an'ny logo, saingy tsy izany. Ireo karazana fonosana ho an'ny logo ireo dia tsy maintsy manana andian-toetra maromaro hahafahany manatanteraka tsara ny iraka ampanaovina azy ireo. Ary inona ireo? Eny:
Tokony ho mora ny mamantatra sy mifikitra ao amin'ny fitadidianao. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia hoe rehefa hitanao io dia ampahafantaroo amin'ny orinasa itondrana anarana azy. Raha mametraka sary famantarana iray izay mifangaroharo loatra ianao, miaraka amina endritsoratra tsy takatra, dia tsy ho afaka hiditra amin'ny besinimaro izy io.
Kely no betsaka. Amin'ny endritsoratra typografika ihany koa. Tokony hotadidinao fa ny loharano tokana, na farafaharatsiny roa, dia mihoatra noho ny ampy. Raha mampiasa bebe kokoa ianao dia hamorona fahatokisana ny mpanjifa. Raha orinasa lehibe ny mpanjifanao dia miasà amin'ny fampiasana typeface iray fotsiny. Etsy ankilany, raha orinasa kely izy ireo, azonao atao ny mampiditra endri-tsoratra ho an'ny anaran'ny orinasa ary iray hafa ho an'ny teny filamatra (raha manana izany).
Mandehana kilasika. Azo atao fa te hampiasa karazana endri-tsoratra izay lamaody ny mpanjifanao, na satria hitany io, novakiany, sns. Miezaha esorina ao an-dohanao. Mandeha vetivety ny lamaody ary amin'ny farany ny logo anao dia hanana daty fahataperan'ny fotoana, ka rehefa afaka kelikely dia tsy maintsy manova azy ianao satria lany andro.
Karazana endritsoratra fononteny ho an'ny logo
Lafiny iray hafa tokony ho raisina ihany koa ny, ao anaty fonts, misy karazana endritsoratra maromaro, izay voasokajy ho vondrona lehibe 5:
Endritsoratra Serif. Izy ireo no malaza indrindra sy tranainy indrindra, satria miresaka momba ny taonjato faha-XNUMX isika (nanomboka tamin'io daty io dia nanomboka nampiasaina izy ireo). Amin'ny fampiasanao azy amin'ny sary famantarana dia homenao ny endrika mpandala ny nentin-drazana, na dia tsy midika ho fomba taloha aza izany, fa kosa kanto sy be pitsiny.
Endritsoratra Sans Serif. Ireo dia mandeha bebe kokoa amin'ny fototra, manala ireo firavaka tamin'ny teo aloha ary mitady hanana tsipika mahitsy sy madio. Ny tanjony dia ny hanome fanazavana sy ho mora azo ary ho fantatra izay tondroin'ny logo.
Slab Serif typeface. Ity loharano ity, izay tsy mitovy amin'ilay teo alohany, dia niseho tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary mampiavaka azy roa etsy ambony. Izy io dia mikatsaka ny hanana vokatra ara-maso matanjaka nefa miaraka amin'izay dia hanavao ny tenany ho an'ny fotoana. Boribory na zoro kokoa izy ireo, tsy mahitsy toa ny hafa. Ho setrin'izany, mampita fahatokisan-tena amin'ny marika sy ny famoronana izy ireo.
Endritsoratra script Ireo dia nanomboka nipoitra tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary nahasarika ny sain'ny maro ny lafiny "sora-tanana". Ny notadiavin'izy ireo dia ireo taratasy izay, raha ny tenany, dia efa niroborobo, samy hafa endrika sns. Ny tanjona, miaraka amin'ireo curvy, endrika miendrika endrika, dia ny hamoronana fahatsapana faharanitan-tsaina sy fahaiza-mamorona.
Loharano aseho. Fantatra ihany koa amin'ny endritsoratra haingon-trano, ny zavatra tadiavin'izy ireo dia ny endrik'ireo litera ireo, amin'ny fomba izay nilalaovana sary famantarana izay noforonina tanteraka (ny litera dia tsy voatery ho endritsoratra, fa tetikasa). Mikasika izay lazainy dia mitady hanome fahafinaretana sy fialamboly ary zavatra tsy ara-potoana izy ireo.
Sora-tarehin'ny logo: ireto no tsara indrindra
Ary ankehitriny, ndao hojerentsika hoe inona ny karazana fonosana azontsika atolotra.
Ity dia endritsoratra ho an'ny logo izay hitanao tamin'ny marika iray izay tena malaza amin'ny rehetra, indrindra raha tianao ny lamaody. Miresaka momba ny VOGUE izahay. Ny sary famantarana azy dia manana an'ity endritsoratra ity ary iray amin'ireo ampiasaina indrindra amin'ny orinasa mifandraika amin'ny lamaody, ny hakantony, ny haitraitra, ny glamor, sns.
Garamond dia typografika izay be mpampiasa amin'ny boky, satria manana endrika kanto izy io fa tsy dia fototra na tsotra loatra. Ity iray ity koa dia manana fahombiazana eo an-damosiny.
Ny fotoana voalohany nanolorana azy dia tamin'ny taona 1900, indrindra tao amin'ny World Fair any Paris, ary tsikelikely dia nanjary nahomby izany isan'andro. Izy io dia tena maneho hevitra ary mora ampiasaina amin'ny logo izay matihanina na te-hanome fotoana tsy voafetra ho an'ny marika.
Araka ny lazain'ny anarany dia sans-serif ity endritsoratra ity. Izany dia tena fototra satria miloka amin'ny tsipika mazava, tsy dia matanjaka loatra, ary mazava be ny famakiana. Izay, ho an'ny fampisehoana, dia tonga lafatra.
Endritsoratra Logo: Didot
Ny endritsikan'i Didot dia hita amin'ny sary famantarana Giorgio Armani. Raha mandinika ianao, dia karazany Serif ary mamorona endrika kanto sy mitandrinaNy tadiavinao dia ny hifantoka amin'ny mpihaino matotra kokoa.
Ho an'ireo mitady famolavolana maoderina, izay tapaka kely amin'ny tsipika mahitsy ary toa voasintona ihany dia manana Canilari ianao. Izy io dia endritsoratra matevina sy mamorona.
Ity endri-tsoratra ity dia iray amin'ireo ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra afisy sarimihetsika amerikana, ary ankafizin'ny mpamorona izy io. Ny ankabeazany dia mifantoka amin'ny karazana orinasa iray, satria efa antitra ny fombany ary mety tsara ho an'ny mpisolovava, ny raharaha mifandraika amin'ny fahafatesana, ny fivavahana sns.
Fontan'ny Logo: Sabo
Raha mitady tetikasa mifandraika amin'ny videogames ny mpanjifanao, fomba arcade, mety ho tonga mora ampiasaina izy io. Ho an'io famolavolana io ihany dia mahasarika ny maro izy ary azonao omena azy io tanteraka (fa tsy manana endrika arcade toy izany fa mpamorona, programmer, sns. Na amin'ny Internet, izay ny olona no manome ny dikan'ilay loharano.
Ny iray amin'ireo loharano ho an'ny karazana logo dia ity, izay mitady miaraha-miory amin'ny mpihaino tanora ary mampita ny fihavaozana, ny famoronana ary ny fialamboly. Raha ho an'ny tanora mpihaino ilay tetik'asa izay eo am-pelatananao dia mety iray amin'ireo hanandrana izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » loharanom-baovao » Ny typefaces tsara indrindra hamoronana logo
Google docs: ny fomba fiasan'ny antontan-taratasin'i Google